🔥 Branded Items တွေကို ၇၀% အထိ Discount ချထားတဲ့ Great Sales Singapore! မှာဈေးဝယ်ရင်း #စင်္ကာပူသွားကြစို့ ။ – YANGON STYLE
🔥 Branded Items တွေကို ၇၀% အထိ Discount ချထားတဲ့ Great Sales Singapore! မှာဈေးဝယ်ရင်း #စင်္ကာပူသွားကြစို့ ။
🔥 Branded Items တွေကို ၇၀% အထိ Discount ချထားတဲ့ Great Sales Singapore! မှာဈေးဝယ်ရင်း #စင်္ကာပူသွားကြစို့ ။ ဒီခရီးစဉ်မှာ ဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်ထားတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေပါရင် ၊ Discount 15 USD ရယူဖို့လည်းမမေ့နဲ့အုန်းနော်။
👉👉👉 July 18 – July 21
👉👉👉 August 09 – August 12
🤩🤩🤩 535 USD ( Special Student Discount Available )
Royal Active Travels မှ #စင်္ကာပူခရီးစဉ်လေးမှာ ပါဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့
✅ လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန် (၂၅) ကီလို ✈️
✅ ကြယ် (၄)ပွင့်ဟိုတယ်
✅ Coach ကားကြီးတွေနဲ့လည်ပတ်ရင်း
70% Discount ချထားတဲ့ branded item တွေကိုစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူလိုက်ကြရအောင်နော်။ 🥰🥰
စင်္ကာပူရဲ့🎉 Great Sale Singapore ဆိုတာ 🎉 တစ်နှစ်မှတစ်ခါ ၊ 21 June ကနေ 28 July အတွင်းဘဲလုပ်တာပါ။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ Branded မျိုးစုံက အပြိုင်အဆိုင် discount တွေပေး ၊ ရွေးစရာပစ္စည်းတွေကလည်းစုံ ၊ ဈေးဝယ်စင်တာတွေ attraction နေရာတွေကလည်း များလွန်းလို့ ဈေးဝယ် ချင်တဲ့ မေမေတွေနဲ့ လျှောက်လည်ချင်တဲ့ သားသားမီးမီးတို့အကြိုက်မို့လို့ ခရီးစဉ်လေးအကြောင်းဆက်ဖတ် ပေးကြပါအုန်း။
🛍🛒🎁 Shopping ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အသွားအပြန် (၂၅) ကီလို ကလည်းပါပြီးသား ဆိုတော့ အတန်ဆုံးနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ဈေးဝယ်မယ်လေ၊ နောက်ပြီးစင်္ကာပူရောက်တုန်း 🚌🚌🚌coach ကားကြီးတွေနဲ့ အေးအေး ဆေးဆေး လည်ရဦးမယ် ၊ ကြယ်၄ပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာလည်းတည်းရင်း ၊ ဘူဖေးတွေလည်း အဝစားရမယ်ဆိုတော့ 😊
ဒီခရီးစဉ်ကဘယ်လောက်တောင် မိုက်နေမလဲဆိုတာ စိတ်ကူးနဲ့တင်အပျော်လွန်နေပါပြီနော်။ 😘
👉 ခရီးစဉ်လေးမှာသွားရောက်လည်ပတ်ရမယ့်နေရာတွေက –
❤️ စင်္ကာပူ Signature ခြင်္သေ့ရေပန်းရုပ်ကြီးရှိရာ Merlion Park 😲
🧡 ကံကောင်းခြင်းတွေအတွက်ဆုတောင်းလို့ရမယ့် Fountain of Wealth
💛 တန်ခိုးကြီး ဗုဒ္ဒမြတ်စွယ်တော်ရှိရာ China Town က Buddha Tooth Relic Temple
💚 ဒူးရင်းသီးပုံ theater ကြီး Esplanade ၊ Marina Bay 😮
💙 ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး Supertrees ကြီးတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာပန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်နဲ့ ဓါတ်ဖမ်းလို့ အလှဆုံး Gardens by the Bay 👌
💜 ရေသတ္တဝါအမျိုးပေါင်း ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ကျော်လောက်ပြထားတဲ့ ငါးပြတိုက် S.E.A Aquarium 🐟🐙
💝 4D ရုပ်ပုံအကြွတွေနဲ့ အလန်းစားဓါတ်ပုံတွေဖမ်းတီးရမယ့် Trick Eye Museum 😮
🧡 Sentosa ကမ်းခြေမှာ လေဆာမီးအလှတွေ ၊ မီးပန်းတွေနဲ့ အထူးအဆန်းရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရမယ့် Wings of Time
💙နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ ရှိတဲ့စင်္ကာပူရဲ့ ပထမဆုံး UNESCO အထိမ်းအမှတ်ဝင် Botanic Garden နဲ့
🛍🛒🎁 ဈေးဝယ်လို့ကောင်းမယ့် Brand မျိုးစုံရှိတဲ့ Suntec City နဲ့
70% Discount တွေချနေတဲ့ Orchard Road က ION Orchard, Tanglin Mall, Orchard Central, 313@Somerset စတဲ့ Branded မျိုးစုံကို တစ်မုန်း Shopping ထွက်လို့ရမှာနော်
ခရီးစဉ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ အသေးစိတ်သိချင်ရင် viber မှာသော်လည်းကောင်း ၊ cb မှာသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိူင်ပါတယ်ရှင်။ 😘
ဆယ်တန်းအောင်ထားပြီးသား သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက်လည်း 15 USD လျှော့ပေးနေသေးတာမို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေ မပြည့်ခင်လေး မြန်မြန်လေးသွားလို့ရအောင်ခုဘဲစာရင်းပေးလိုက်ပါနော်။ 💏💼🎒
🏠 တိုက်၃၇ ၊ အခန်း၁၁ ၊ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ယာ ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊
☎️ 09 42 778 8100
☎️ 09 42 778 8200 တို့ကို Viber မှ တစ်ဆင့် (သို့) chat box မှလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ 😊
” ဖော်ရွေပျူဌာမှု ၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် တာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော Royal Active နဲ့ခရီးသွားပါ။”
Credit : https://www.facebook.com/royalactivetravels/?